Maitiro ekutonga kuti koiri inoda kuchinjaniswa here kana kwete?
NaLi Chenyu / hcfire360 Mbudzi
Haisi zano rakanaka kubata waya yepulagi panguva iyi nekuti magetsi anogara achitora nzira yekusagadzikana pasi uye izvo zvinogona newe. Iyo coil inogadzira kubva ku17,000 volts kumusoro. Chinhu chakanaka ndechekuti iyo coil haina kuburitsa yakawanda amperage saka kukatyamadzwa kwacho kungangove kusiri kungopfuura chiitiko chinogutsa. Mamwe ma coils ari capacitor kuburitsa system uye ane yakakwana amperage inogona kukuvadza. Kana iwe usiri kujairana nerudzi rwuripo, zvine hungwaru kuchengetedza maoko anosvika 4 inches kubva kune waya kana injini iri kushanda.
Iyo yakanaka, yebhuruu spark inofanira kuonekwa ichisvetuka mukaha wepaki. Kana iwe ukaona isina kusimba yeorenji spark kana isina zvachose, iyo yekutanga coil waya kana iyo coil inofungidzirwa. Vhara injini.
Tarisa waya wecoil kuti uenderere mberi ne volt-ohmmeter nekuimatanura uye kubatanidza mutobvu mumwechete kumucheto kwetambo yekoil uye nekuona kushorwa kwakadzingwa pane ohmmeter. Kana iyo coil waya ichiratidza kupikisa kwakanyanyisa, kungave kuri pamusoro pe3,000 ohms, chitsiva.
Dzinga waya dzakanaka uye dzisina kunaka pane coil. Shandisa ohmmeter kutarisa kuenderera pakati peye yakanaka terminal neyakaipa terminal. Panofanirwa kuve nekupokana kudiki muchimiro che .001- .007 ohms. Zvino fambisa imwe yekutungamira kune yepakati coil tower. Shandisa imwe inotungamira kuyedza ese maviri matemu kune coil tower. Kuramba kunofanira kunge kuri pakati pe7,500 kusvika 18,000 ohms. Kana iyo coil yakundikana chero bvunzo idzi, chinja coil.
Prev Peji: Rudzii rwekutonga kwemhando iyo TAKUMI inayo kuitira kuti uwane mhando yepamusoro?
Inotevera Peji: Inguvai pfupi iyo TAKUMI inogona kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvevatengi?